Fa Yesu Mpae no Bɔ Wo Bra | Adesua
Wotuu Wɔn Ho Mae Koraa wɔ Philippines
Abɔde Ma Yehu sɛ Onyankopɔn Wɔ Hɔ
Woyɛ Yehowa Akoa​​—Som No
ASETENAM NSƐM Yɛde Yɛn Ho Ato Yehowa So Anya Nhyira Pii
Mpae a Ɛka Koma​​—Sua Biribi Fi Mu
Fa Yesu Mpae no Bɔ Wo Bra
Wubetumi Abɔ Nnipa Pii Kɔkɔ?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | October 2013
“Agya, . . . hyɛ wo ba no anuonyam, na wo ba no nso ahyɛ wo anuonyam.”—YOH. 17:1.
WUDWEN HO SƐN?
Sɛ Bible ka sɛ ‘yenhu’ Onyankopɔn a, dɛn na ɛkyerɛ?
Asomafo no bere so no, ɔkwan bɛn so na Yehowa buaa Yesu mpae a ɛwɔ Yohane ti 17 no?
Yɛbɛyɛ dɛn ama Yesu mpae no akyerɛ yɛn kwan nnɛ?
1, 2. Bere a Yesu ne n’asomafo anokwafo no dii Twam afahyɛ no wiei afe 33 Y.B. no, dɛn na ɔyɛe?
NA ƐYƐ Nisan da a ɛto so 14, afe 33 Y.B. Saa bere no na ade asa. Ná Yesu ne n’asomafo no adi Twam afahyɛ no awie. Saa afahyɛ yi kaee wɔn sɛ Onyankopɔn gyee wɔn nananom fii Egypt nkoasom mu. Nanso na Yesu asuafo anokwafo no rebenya ogye bi a ɛsen saa koraa. Ná ade rebɛkye ma atamfo akyere wɔn wura Yesu akum no. Nanso na owu yayaw yi rebɛdan nhyira, efisɛ na Yesu mogya a obehwie agu no bɛma adesamma ade wɔn ho afi bɔne ne owu ho.—Heb. 9:12-14.
2 Ná Yesu mpɛ sɛ yɛn werɛ befi adom a Onyankopɔn ayɛ yɛn yi, enti ɔde afahyɛ foforo bi sii Twam afahyɛ no ananmu sɛ yɛnkae afe biara. Ɔfaa paanoo a mmɔkaw nnim bubuu mu, na ɔde maa asomafo anokwafo 11 no mu biara kae sɛ: “Eyi gyina hɔ ma me nipadua a mo nti wɔde bɛma. Monkɔ so nyɛ eyi mfa nkae me.” Saa ara na ɔyɛɛ kuruwa a bobesa wom no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Kuruwa yi gyina hɔ ma apam foforo a ɛnam me mogya so, nea wobehwie agu ama mo no.”—Luka 22:19, 20.
3. (a) Yesu wu akyi no, nsakrae kɛse bɛn na ɛbae? (b) Bere a yɛresusuw Yesu mpae a ɛwɔ Yohane ti 17 ho no, nsɛmmisa bɛn na ɛsɛ sɛ yedwinnwen ho?
3 Ná Mmara apam a ɛwɔ Onyankopɔn ne Israel man no ntam rebetwam. Na Yehowa de apam foforo rebesi anan; eyi yɛ apam a Yehowa ne Yesu akyidifo a wɔasra wɔn no yɛe. Ná Yesu ani kũ honhom fam ɔman foforo yi ho. Na tete Israelfo no ama nneɛma pii apaapae wɔn mu—wɔn som mu mpo na wɔn mu apaapae. Eyi de ahohorabɔ kɛse baa Onyankopɔn din kronkron no so. (Yoh. 7:45-49; Aso. 23:6-9) Ná Yesu mpɛ sɛ mpaapaemu ba n’akyidifo mu; mmom na ɔpɛ sɛ wɔbom de biakoyɛ yɛ adwuma hyɛ Onyankopɔn din anuonyam. Enti, dɛn na Yesu yɛe? Ɔbɔɔ mpae a ɛka koma sen mpae biara a nnipa akenkan pɛn. (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua no mfiase no.) Wubehu mpae yi wɔ Yohane 17:1-26. Bere a yɛresusuw mpae yi ho no, yemmisa yɛn ho sɛ, “Onyankopɔn abua Yesu mpae yi anaa? Mede mpae yi mu nsɛm rebɔ me bra?”
NEA NA EHIA YESU PAA
4, 5. (a) Sɛ yɛhwɛ nsɛm a Yesu de fii ne mpae no ase a, dɛn na yesua fi mu? (b) Ɔkwan bɛn so na Yehowa buaa Yesu ankasa abisade maa no?
4 Yesu kyerɛkyerɛɛ n’asuafo no Onyankopɔn ho nneɛma pii kosii anadwo kɔnkɔn. Afei ɔmaa n’ani so kyerɛɛ soro bɔɔ mpae sɛ: “Agya, dɔn no adu; hyɛ wo ba no anuonyam, na wo ba no nso ahyɛ wo anuonyam, sɛnea woama no ɔhonam nyinaa so tumi, sɛ dodow a wode ama no nyinaa no, ɔmma wɔn daa nkwa. . . . Mawie adwuma a wode ama me sɛ menyɛ no de ahyɛ wo anuonyam wɔ asase so. Enti afei, Agya, fa anuonyam a na mewɔ wɔ wo nkyɛn ansa na wiase reba no hyɛ me anuonyam w’ankasa wo nkyɛn.”—Yoh. 17:1-5.
5 Hyɛ no nsow sɛ nneɛma a na ehia Yesu paa na ɔde fii ne mpae no ase. Nea edi kan ne ne soro Agya no din a ɔbɛhyɛ no anuonyam. Bere a ɔrekyerɛ n’asuafo no sɛnea wɔbɛbɔ mpae no, ɔkaa biribi a ɛte saa. Ɔkae sɛ: “Agya, ma wo din ho ntew.” (Luka 11:2) Nea ɛto so abien, Yesu bɔɔ mpae maa n’asuafo. Ɔsrɛe sɛ “ɔmma wɔn daa nkwa.” Ɛno akyi na Yesu srɛɛ nea ɔno ankasa hia. Ɔsrɛɛ n’Agya sɛ: “Agya, fa anuonyam a na mewɔ wɔ wo nkyɛn ansa na wiase reba no hyɛ me anuonyam w’ankasa wo nkyɛn.” Yehowa maa ne Ba no biribi a ɛsen nea obisae; ɔmaa no “din a ɛkyɛn” abɔfo de koraa.—Heb. 1:4.
‘HU NOKWARE NYANKOPƆN KORO PƐ NO’
6. Dɛn na na asomafo no bɛyɛ na wɔanya daa nkwa? Yɛyɛ dɛn hu sɛ wotumi yɛɛ saa?
6 Bere a Yesu rebɔ mpae no, ɔkaa biribi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ na Onyankopɔn de daa nkwa adom yɛn. (Monkenkan Yohane 17:3.) Ɔkae sɛ ɛsɛ sɛ ‘yehu’ Onyankopɔn ne Kristo yiye. Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa? Nea edi kan, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ani ne yɛn aso nyinaa yɛ adwuma de sua Yehowa ne ne Ba no ho ade. Nea ɛto so abien, ɛsɛ sɛ yɛde nea yɛresua no bɔ yɛn bra. Ná asomafo no adi kan ayɛ nneɛma abien yi dedaw, efisɛ Yesu bɔɔ mpae sɛ: “Nsɛm a wode maa me no, mede ama wɔn, na wɔagye.” (Yoh. 17:8) Nanso sɛ wobenya daa nkwa a, na ɛsɛ sɛ wɔkɔ so dwinnwen Onyankopɔn nsɛm ho na wɔde yɛ adwuma wɔ wɔn asetenam daa. Ɛnde, asomafo no tumi yɛɛ eyi kosii sɛ wowu fii asase so anaa? Yiw, wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. Nea enti a yɛreka saa ne sɛ wɔakyerɛw wɔn mu biara din wɔ ɔsoro Yerusalem anaa Yerusalem Foforo no fapem 12 no so.—Adi. 21:14.
7. Sɛ Bible ka sɛ ‘yenhu’ Onyankopɔn a, dɛn na ɛkyerɛ? Adɛn nti na ehia sɛ yɛyɛ saa?
7 Sɛ yɛpɛ sɛ yɛtena ase daa a, ɛsɛ sɛ ‘yehu’ Onyankopɔn. Hela asɛmfua a wɔkyerɛ ase ‘hu’ wɔ ha no kyerɛ sɛ “wobɛkɔ so ahu.” Enti sɛ Bible ka sɛ yenhu Onyankopɔn a, ɛkyerɛ sɛ yɛbɛkɔ so asua ne ho ade ahu ne ho nsɛm pii. Onyankopɔn ne Ɔbɔadeɛ Pumpuni no, enti sɛ Bible ka sɛ yenhu no a, ɛnkyerɛ sɛ yenhu ne su ahorow anaa n’atirimpɔw kɛkɛ. Mmom, ɛsɛ sɛ yɛdɔ no de yɛn ho fam ne ho papee. Bio nso ɛsɛ sɛ yɛdɔ yɛn nuanom mmarima ne mmea Kristofo. Bible ka sɛ: “Nea ɔnnɔ no nnim Onyankopɔn, efisɛ Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yoh. 4:8) Sɛ yɛka sɛ yenim Onyankopɔn a, nea ɛkyerɛ nso ne sɛ yɛyɛ osetie ma no. (Monkenkan 1 Yohane 2:3-5.) Ɛyɛ akwannya kɛse paa sɛ yɛabehu Yehowa! Nanso sɛ yɛanhwɛ yiye a yɛne Yehowa adamfofa betumi asɛe sɛnea Yuda Iskariot ne Yehowa adamfofa sɛee no. Enti momma yɛnyere yɛn ho nhyɛ adamfofa no mu den. Yɛyɛ saa a, awiei koraa no Yehowa bɛma yɛn akyɛde nwonwaso bi—daa nkwa.—Mat. 24:13.
‘W’ANKASA WO DIN NTI’
8, 9. Bere a Yesu wɔ asase so no, dɛn paa na na ehia no? Atetesɛm bɛn na yebetumi aka sɛ Yesu poe?
8 Sɛ wohwɛ Yesu mpae a ɛwɔ Yohane ti 17 no a, wuhu ade biako bi ntɛm. Yehu pefee sɛ na ɛnyɛ n’asomafo no nkutoo na ɔdɔ wɔn na mmom n’akyidifo a wɔbɛba akyiri yi nyinaa. (Yoh. 17:20) Nanso ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ ɛnyɛ yɛn nkwagye ne ade titiriw a ehia Yesu. Bere a ofii ne som adwuma ase wɔ asase so kosi sɛ owiei nyinaa, nea na ehia no paa ne sɛ ɔbɛtew n’Agya din ho na wahyɛ no anuonyam. Bere bi a Yesu wɔ Nasaret hyiadan mu no, ɔkyerɛɛ nea enti a ɔbaa asase so. Ɔkenkan fii Yesaia nhoma mmobɔwee mu sɛ: “Yehowa honhom wɔ me so, efisɛ ɔsraa me sɛ memmɛka asɛmpa nkyerɛ ahiafo.” Yebetumi aka paa sɛ bere a Yesu kenkan saa asɛm no, ɔbɔɔ Onyankopɔn din pefee.—Luka 4:16-21.
9 Bere tenten ansa na Yesu reba asase so no, atetesɛm nti, na Yuda som mu akannifo ama nkurɔfo agyae Onyankopɔn din bɔ. Yebetumi aka paa sɛ Yesu poo saa atetesɛm a ennyina Kyerɛwnsɛm so no. Ɔka kyerɛɛ Yudafo akannifo no sɛ: “M’Agya din mu na mebae, nanso munnye me; sɛ obi foforo ba ɔno ankasa din mu a, ɔno de, mubegye no.” (Yoh. 5:43) Aka nna kakra bi ma Yesu awu no, ɔkaa biribi de kyerɛɛ nea na ehia no paa wɔ asetenam. Ɔkae sɛ: “Agya, hyɛ wo din anuonyam.” (Yoh. 12:28) Enti sɛ yɛhwɛ Yesu mpae a yɛresusuw ho yi a, yehu sɛ nea na ɛda ne koma so ne sɛ ɔbɛhyɛ n’Agya din anuonyam.
10, 11. (a) Ɔkwan bɛn so na Yesu daa n’Agya din adi? (b) Adɛn nti na Yesu asuafo reda Onyankopɔn din adi?
10 Yesu bɔɔ mpae sɛ: “Mada wo din adi akyerɛ nnipa a wuyii wɔn fii wiase maa me no. Ná wɔyɛ wo dea na wode wɔn maa me, na wɔadi w’asɛm so. Afei nso, minni wiase bio, na wɔn de, wɔwɔ wiase na mereba wo nkyɛn. Agya Kronkron, w’ankasa wo din a wode ama me nti hwɛ wɔn so na wɔayɛ biako sɛnea yɛn nso yɛyɛ biako no.”—Yoh. 17:6, 11.
11 Bere a Yesu kae sɛ wada n’Agya din adi akyerɛ n’asuafo no, ɛnyɛ n’ano kɛkɛ na ɔde bɔɔ din no. Mmom ɔyɛɛ biribi foforo nso: Ɔboaa n’asuafo no ma wohuu nea Onyankopɔn din kyerɛ, na ɔma wohuu Onyankopɔn su ahorow ne ɔkwan a ɔfa so ne yɛn di. (Ex. 34:5-7) Seesei Yesu yɛ Ɔhene wɔ soro na ɔda so ara boa n’asuafo ma wɔda Yehowa din adi wɔ asase so baabiara. Adɛn nti na wɔreyɛ saa adwuma yi? Wɔreyɛ saa de aboa nnipa pii ma wɔasua Yehowa ho ade ansa na wiase bɔne yi aba awiei. Saa bere no Yehowa begye n’adansefo anokwafo nyinaa, na obiara behu sɛ ampa Yehowa din kɛse no fata no!—Hes. 36:23.
EYI BƐMA “WIASE AGYE ADI”
12. Nneɛma abiɛsa bɛn na ehia sɛ yɛyɛ na yɛatumi ayɛ nkwagye adwuma no?
12 Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo sɛ wonwie adwuma a ɔno Yesu fii ase no. Ɔkae wɔ ne mpaebɔ no mu sɛ: “Sɛnea wosomaa me wiase no, me nso mesomaa wɔn wiase.” Nanso na Yesu nim sɛ, sɛ wobetumi ayɛ nkwagye adwuma no a, ehia sɛ wodi wɔn mmerɛwyɛ so, enti ɔboaa wɔn. Afei ɔsrɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa n’asuafo no mma wontumi nyɛ nneɛma abiɛsa yi: Nea edi kan, ɔkae wɔ ne mpae no mu sɛ Yehowa mmoa n’asuafo ma wɔntwe wɔn ho mfi Satan wiase no ho. Nea ɛto so abien, ɔsrɛe sɛ Onyankopɔn mmoa n’asuafo ma wonni n’Asɛm so na wɔnyɛ kronkron. Nea ɛto so abiɛsa, Yesu srɛe sɛ biakoyɛ a ɛda ɔne n’Agya ntam no, saa biakoyɛ no bi ntena n’asuafo ntam. Enti ɛsɛ sɛ yɛn mu biara bisa ne ho sɛ, ‘Mereyɛ nneɛma abiɛsa a Yesu bisae no?’ Na Yesu wɔ awerɛhyem sɛ, sɛ n’asuafo yɛ saa nneɛma yi a, ɛbɛma wiase no agye asɛm no adi.—Monkenkan Yohane 17:15-21.
Tete Kristofo no maa honhom kronkron kyerɛɛ wɔn kwan ma wɔyɛɛ biako (Hwɛ nkyekyɛm 13)
13. Ɔkwan bɛn so na Yehowa buaa Yesu mpae no wɔ asomafo no bere so?
13 Sɛ yɛkan Asomafo nhoma no a, yehu sɛ Yehowa buaa Yesu mpae no. Ná tete Kristofo no bi yɛ Yudafo ne Amanaman mufo, asikafo ne ahiafo, adehye ne nkoa, enti ɛnyɛ den koraa sɛ anka mpaapaemu kɛse bɛba wɔn mu. Nanso na wɔn nyinaa yɛ biako. Paulo kae mpo sɛ wɔte sɛ nipadua akwaa, na Yesu ne wɔn ti. (Efe. 4:15, 16) Sɛ wohwɛ mpaapaemu a ɛwɔ Satan wiase a, na biakoyɛ a ɛte saa yɛ nwonwa paa! Sɛ ɛnyɛ Yehowa na ɔde ne honhom kronkron boaa wɔn ma wɔyɛɛ biako a, anka dɛn bio na ebetumi ama wɔayɛ saa?—1 Kor. 3:5-7.
Yehowa nkurɔfo a wɔwɔ wiase nyinaa ayɛ biako resom no (Hwɛ nkyekyɛm 14)
14. Ɔkwan bɛn so na Yehowa abua Yesu mpae no wɔ yɛn bere yi so?
14 Awerɛhosɛm ne sɛ bere a asomafo no nyinaa wuwui no, nneɛma sesae. Ɔwae kɛse a na wɔahyɛ ho nkɔm no kɔfaa Kristoman akuw ahorow bae. (Aso. 20:29, 30) Nanso afe 1919 mu no, Yesu gyee n’akyidifo a wɔasra wɔn no fii atoro som mu na ɔde “koroyɛ hama a ɛyɛ pɛ” kaa wɔn bom. (Kol. 3:14) Asɛnka adwuma a wɔreyɛ no aka wiase no sɛn? Seesei “nguan foforo” bɛboro ɔpepem ason a “wofi amanaman ne mmusuakuw ne nnipa ne kasa nyinaa mu” ne wɔn a wɔasra wɔn no aka abom resom Onyankopɔn sɛ kuw biako. (Yoh. 10:16; Adi. 7:9) Eyi yɛ adanse paa a ɛkyerɛ sɛ Yehowa abua asɛm a Yesu kae wɔ ne mpaebɔ mu yi: “Wiase [nhu] sɛ wo na wosomaa me na wodɔ wɔn sɛnea wodɔ me no.”—Yoh. 17:23.
MPAE NO AWIEI A ƐKA KOMA
15. Ade titiriw bɛn na Yesu srɛ maa n’akyidifo a wɔasra wɔn no?
15 Nisan da a ɛto so 14 anwummere no, Yesu hyɛɛ n’asomafo no anuonyam, kyerɛ sɛ ɔne wɔn yɛɛ apam sɛ wɔbɛka ne ho adi ade wɔ n’Ahenni mu. (Luka 22:28-30; Yoh. 17:22) Afei Yesu srɛ maa wɔn a wɔbɛba abɛyɛ n’akyidifo a wɔasra wɔn nyinaa sɛ: “Agya, nea wode ama me no de, mepɛ sɛ anka baabi a mewɔ no, wɔn nso bɛka me ho, na wɔahu anuonyam a wode ama me no, efisɛ na wodɔ me ansa na wɔhyɛɛ wiase ase.” (Yoh. 17:24) Nguan foforo no ani mmere hokwan a wɔn a wɔasra wɔn no nsa aka yi, mmom wodi ahurusi. Eyi nso da no adi sɛ ɛnnɛ biakoyɛ kɛse wɔ nokware Kristofo nyinaa mu.
16, 17. (a) Bere a Yesu rewie ne mpaebɔ no, dɛn na ɔkae sɛ ɔbɛkɔ so ayɛ? (b) Dɛn na ɛsɛ sɛ yesi yɛn bo sɛ yɛbɛyɛ?
16 Adanse pii wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ Yehowa wɔ nkurɔfo bi a wonim no, na wɔde biakoyɛ resom no. Nanso nyamesom akannifo afura nnipa pii ani, enti wonnye saa nokwasɛm yi ntom. Saa na na ɛte wɔ Yesu bere so. Enti Yesu de mpae no baa awiei sɛ: “Trenee Agya, wiase no nnim wo; nanso me de minim wo, na eyinom abehu sɛ wo na wosomaa me. Mama wɔahu wo din na mɛma wɔahu, na ɔdɔ a wode dɔɔ me no atena wɔn mu na matena wɔn mu.”—Yoh. 17:25, 26.
17 Yebetumi aka paa sɛ Yesu de ɔseɛ ayɛ ɔyɔ. Ɔne asafo no Ti, na ɛnnɛ nyinaa ɔboa yɛn ma yɛda n’Agya din ne n’atirimpɔw adi kyerɛ nkurɔfo. Ɛnde, momma yɛn nyinaa mmrɛ yɛn ho ase nhyɛ Yesu ase na yɛmfa nsi ne ahokeka nyɛ asɛnka ne asuafoyɛ adwuma no sɛnea wahyɛ yɛn no. (Mat. 28:19, 20; Aso. 10:42) Bio, momma yɛnyɛ nea yebetumi biara sɛ biakoyɛ bɛtena yɛne yɛn nuanom nyinaa ntam. Yɛyɛ saa a, ɛbɛkyerɛ sɛ yɛama Yesu mpae no rekyerɛ yɛn kwan. Eyi bɛhyɛ Yehowa din anuonyam na ɛde anigye a enni kabea abrɛ yɛn.
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2013